The aan la rabin - Part 19 | Apg29
The aan la rabin - Part 19
In qaybtan waxaan kuu sheegi doonaa dhacdo aad u saxariir badan, waxa ku dhacay Michael sidii aan galay dagaal la qaybtii ugu dambaysay.
Michael ahaa arday aan caadi ahayn ee dugsiga. Weligay ay garanayn isaga. Anigu garan maayo taariikhdiisa ama kan dhabtii ahayd, intaas ka badan, waxaan fahamsanahay in macalimiinta wuxuu arkaa in ardayga qas ka ah oo adag.
Ka dib markii macallinka fasalka ayaa canaan isaga, sidaas darteed wuxuu iga dhab qaaday in daafaca. Mid ka mid ah wakhtiga dhacdadan ka dib, waxa uu ahaa arday kale oo ii xoogsheegtay. Oo haddana wuxuu i geeyey difaaca iyo riixay qofkan la jilbo joogay isagoo sida uu keydka fadhiyey oo ay weheliyaan a kuwo kale oo yar oo waddada ka baxsan fasalka lagu jiro nasasho. Waxaa si xunna ma ay samayn, laakiinse waxaan u yaabeen taagan dhinaca iyo kaliya daawado. Anigu ma aan aqoonin wixii ay ku odhan saabsan xaaladda this. Waxaan xusuustaa in uu yiri ma aha in aad diirsado Chris, laakiin waa in aad isaga u noqon nooc, ka dibna wuxuu dib labadiisii jilbaha kaliya isaga hoos u riixay kursiga keydka uu miisaanka.
Michael badan tahay in uu ahaa wadnaha qof aad u naxariis badan oo lahaa qalbi wanaagsan laakiin aad u buuq badan oo murugsan. Wuxuu u tegey inuu baska dugsiga la mid ah sida igu. Waxa uu sarre on qof mil badan halkaas oo aan ka helay on at beer ku taal Skeen si ay u tagaan labada mile Ljungby hore.
Mid ka mid ah galabtii marka aan guriga ka baxay oo baska SJ badan oo ahaa Michael oo saaxiib la ah uu aad u kharriban. Waxay hanatay, qaylo iyo bixiyeen iyo dib u soo orday iyo channel ee gamcihiisa ee baska ka tagay, halka oo dhan ardayda kale fadhiistay aamusnaan in kuraasta ay, iyo dhicin waxba odhan. The laba qof oo dhalinyaro ah ayaa sidaas la wareegay baska ee aaminsan in ay "ka qaaday baska" oo samayn karin alla waxay doonayaan. dhan laba mile aan la baska tageen ka hor inta aan helay off at my stop, Iyana waxay xajiyeen on halka sabirka darawalka baska ee ku orday dheeraad ah oo dheeraad ah oo ay daqiiqadii ugu dhakhsaha badan oo ay gaareen xaddidan.
Maalintii xigtay, Michael ii sheegay in kalsooni ii, sida aan kursiga keydka isla fadhiistay, uu u riixriixan oo nin, wixii ku dhacay baska ka dib markii aan helay off. Darawalkii baska samra eryay baska ayaa ugu dambeyntii noqday sidaas cadhooday in uu gariiray xanaaq iyo tuuro by Michael iyo saaxiibkiis meel wadada ka hor ay gaareen ay stop.
Waxaan waxba ku saabsan this yiri, laakiin bartey waan ogaa in darawalka baska lahayn doorasho laakiin in la sameeyo wixii uu sameeyey. Waa in aad ogaato in mar in aan opinion no. Anigu ma aan boo ama baa, waxaan kaliya dhegaystay oo isku dayay in ay qaataan waxyaabaha sida ugu wanaagsan ee aan kari waayeen. Anigu ma aan falanqeeye ah, ma aan ogayn waxa uu noqon doono, laakiin waxa ay ahayd in si kasta oo aan taagnaa waxaa ku maqnaa oo kaliya daawaday. Anigu ma ahaa qof weyn ee riwaayadaha ee, laakiin kaliya observer xasilloon saxariiriyo iyo xishood iyo haqab-yar, kuwaas oo aan dhicin faragelin.
Waxa dhab ahaan soo socda la wiilka dheer skranglige stökige kii i xoogsheegtay, oo waxaa ku qeyliyay at by my macalinka dhacay, Anigu garan maayo marka ay timaado faahfaahinta. Laakiin waxa dhacay uu ahaa xun naxdin leh oo arxan. Waxaa ka nixin lahaa dugsiga oo dhan iyo ardayda ka dareemi lahayd xun oo ay qorayaan wargeysyada lahaa ku saabsan. Gaar ahaan, waxaan ogahay in ay fasalka wada tayda ah ayaa sheegay in uu lahaa calool xanuun dhacdada ah.
Michael oo saaxiib la ah uu Patrick la odhan jiray ka soo socda mid ka mid ah fiidkii tuulada halkaas oo ay ku noolaayeen. Waxay la kulmaan laba ama saddex qof oo kale oo dhallinyaro ah, kuwaas oo sidoo kale soo baxay oo ku saabsan khaas fiidkii in. Mid ka mid ah lahaa silsilad isaga la sameeyey sidii uu ku horaantii fiidnimo ayaa laga xaday ganacsi. Waxay ahayd silsilad in la xiray lacagta dhamaadka heshiiska.
Markii la weeraray, kuwaas oo dhallinyarada Michael iyo Saaxiibkiis. Michael lagu garaacay xoog iyo si waxashnimo ah ee silsiladda. Saaxiibkiis Patrick cararay qoorta madaxa. Waxa uu ka badbaaday, laakiin Michael diriray lagu hoobtay oo ay u dilaan by garaaca arxan darada ahaa ee silsiladda.
My kulan la Michael ma bilowday si wanaagsan, ka dibna waxaan ku dhuftay goror ah isaga, sidii aan kuu sheegay in qayb ka mid ah la soo dhaafay. Laakiin waxaan saaxiibbo bay noqdeen, oo waxay lahaayeen is ixtiraamaan, haa tahay, xitaa wuxuu i difaacay ka hor dadka kale marka ay ii xoogsheegtay. Waxaan qabaa Michael lahaa qalbi wanaagsan, inkastoo xaqiiqda ah in darawalka baska uu noqday sidaas cadhooday in uu gariiray markii uu dibadda ku tuureen Michael iyo saaxiibkiis.
dhab ahaantii waxaan ka helay saaxiib waqti gaaban ka hor sidan arxan, dunida qaaday.
calanka dugsiga ayaa waxaa wax tara oo bar-daqal.
All saamiyada ilaa hadda in la rabin